Ny vidin'ny Xiaomi Mi Band 3 dia efa tafaporitsaka | Androidsis
Roa andro monja dia tanterahina any Shina ny hetsika Xiaomi. Hetsika iray izay hanoloran'ny marika malaza antsika zava-baovao marobe. Ny iray amin'ireo vokatra ho haintsika fantarina ao dia ny Xiaomi Mi Band 3. Tsy ho ela dia hidona amin'ny tsena ny taranaka fahatelo amin'ireo haba-tànana mahomby, miaraka amin'ny tanjona hamafana ny varotra.
Nandritra ny herinandro maromaro dia naseho ny antsipiriany vitsivitsy momba izany. Na dia tsy hijanona hatramin'ny Alakamisy aza raha ny fahalalana rehetra momba an'ity Xiaomi Mi Band 3 ity dia fantatra lalindalina. Saingy raha te hahalala ny vidiny dia tsy hiandry ela toy izany isika.
Marika manokana ianao no nanao ny lesoka tamin'ny fampiakarana ny vidin'ny fehin-tànana amin'ny katalaogin'ny vokatrao, na dia nofafan'izy ireo aza izany taty aoriana. Saingy hitan'ny mpampiasa maro izay nanomboka nizara avy hatrany ity pikantsary ity tamin'ny vidin'ny fehin-tànana.
Ny vidin'ny Xiaomi Mi Band 3 dia 169 yuan. Ho takalony dia izy ireo eo amin'ny 23 euros, noho izany dia mampanantena izy io fa ho vidiny mirary ho an'ny mpampiasa. Na dia azo atao aza fa somary avo kokoa ny vidiny rehefa mahatratra ny tsena eropeana izy. Saingy mety ho fantatsika izany vidiny izany amin'ny hetsika Alakamisy.
Ity Xiaomi Mi Band 3 ity dia nataon'i Huami indray. Ny famolavolana dia mitazona ny làlan'ny taranaka teo aloha, na dia noporofoina bebe kokoa aza ny fiolahana ny endriny tamin'ity fotoana ity. Ary koa, ny efijery OLED dia antenaina ho somary lehibe kokoa noho ny teo aloha. Ity dia hampiseho fampahalalana bebe kokoa amin'ny efijery.
Se antenainay fa hamidy any Chine ny haba amin'ny 6 Jona. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy fantatra ny daty fandefasana ny Xiaomi Mi Band 3 any Eropa. Angamba ny alakamisy 31 mey izao dia hametraka fisalasalana momba izany isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Nanivana ny vidin'ny Xiaomi Mi Band 3
Peke Danny dia hoy izy:
Zavatra lafo amin'ny fahitako azy, hitako fa mora tohina kokoa amin'ny rangotra izay namboarina ary raha tsy misy vaovao manavaka ny 2 izy, dia hisy ny tifitra kely
Valiny amin'i Peke Danny